Imiphi imishwana ezosiza ukugwema izingxabano ngababili - Psychology 2022
Imiphi imishwana ezosiza ukugwema izingxabano ngababili
Ngiyakuzwa, futhi ngifuna ungiqonde nawe
Yakha umusho ngaphandle kwecezu elithi "hhayi": "Ngifuna …"
Ngokuhamba kwesikhathi, kunoma yibuphi ubuhlobo, kuba nomzuzwana lapho umbhangqwana uyeka ukucabanga ukuthi yimaphi amagama okufanele uwasho kumlingani wawo phakathi nengxabano. Ngenxa yalokho, amabinzana amawala abulala ngempela uthando ajikijelwa kothandekayo.
Ekuqaleni kobuhlobo, umbhangqwana ngamunye uzocabanga izikhathi ezingu-100 ngaphambi kokusho okuthile. Ngokuhamba kwesikhathi, abantu bayajwayelana futhi bazivumele ukuthi basho yonke into. Izazi zokusebenza kwengqondo zikholelwa ukuthi lokhu akulungile, futhi ngokuvamile kuholela ekudalweni kwe-microclimate engathandeki kakhulu kumbhangqwana.
Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe bayeluleka ukuba uzijwayeze ukusebenzisa imishwana engu-4 elula kunoma yisiphi isimo sokungqubuzana esizosiza ukugcina ubuhlobo.
Kudingeka utshele umuntu ukuthi ulwela ngobuqotho ukumqonda, futhi wamukele ukuma kwakhe. Yebo, umbono wakho ungase uhluke - futhi lokho kulungile. Inhloso yalesi sisho akukhona ukuphikisa ukwahlulela kwakho ekwahluleleni kwakhe, kodwa ukuzama ukuthola lokho esivumelana ngakho.
Ngakho-ke, funda ukushintsha ingxenye ethi "kodwa" engxenyeni ethi "futhi". Bamba umehluko womzwelo phakathi kwemisho emibili: "Ngiyakuzwa, kodwa ngifuna ukuthi ungiqonde futhi" - ungezwa ukuphikiswa lapha, futhi isimo sokungqubuzana sizokhula kuphela. Futhi nansi indlela ibinzana lesibili elizwakala ngayo: "Ngiyakuqonda, futhi ngifuna ukuthi ungiqonde futhi" - lolu ucingo lwenkhulumomphendvulwano.
Ingxenye ethi "hhayi" ihlale igxile kokubi, ngakho-ke izazi zokusebenza kwengqondo azicebisi ukuyisebenzisa ezimweni ezingqubuzanayo nomlingani wakho womphefumulo. Funda ukwakha imishwana ngokugcizelela kokuhle.
Isibonelo, inkulumo ethi: "Angifuni ukuthi ungishayele izikhathi ezingu-100 ngosuku" ingashintshwa ngokuthi: "Ngifuna ngempela ukuthi ungithembe". Futhi, uma esimweni sokuqala ulindelwe ukungqubuzana, okwesibili - kukhona ithuba elihle lokudlulisa isimo esishubile sibe inkhulumomphendvulwano eyakhayo.
Kungase kubonakale kuyinkimbinkimbi, kodwa uma ufuna impi nomphefumulo wakho womshado, mtshele ngokushesha ngothando. Ngokuvamile le nqubo iqala ukugxila emicabangweni yakho kokuhle, futhi isimo sokungqubuzana silahlekelwa ukuqina.
Yiqiniso, lokhu ngeke kuyixazulule inkinga, kodwa kuzosiza ukuqeda imizwa engemihle.
Uma ubona ukuthi isimo siyaphuma ekulawuleni futhi usuqhelelene nezwi eliphakanyisiwe, xolisa ngokuqala kokungqubuzana. Izazi zengqondo zithi inqubo enjalo izopholisa intshiseko yolunye uhlangothi futhi ngemva kwesikhathi esifushane, lapho uthulisa, kuzokwazi ukuxazulula le nkinga ngendlela ezolile.
Indlela yokuxazulula izingxabano ukuze ungalethi ubuhlobo onqenqemeni lokuqhekeka?
Ukungezwani okuncane noma okukhulu kwabashadikazi akusho ukuthi udinga ukuqeda ubuhlobo. Indlela yokuxazulula izingxabano ukuze ungalethi ubuhlobo onqenqemeni lokuqhekeka - funda endabeni evela kusazi sokusebenza kwengqondo
Imikhiqizo ye-TOP-3 emnandi ezosiza ukuqinisa amasosha omzimba futhi uzivikele emkhuhlaneni nasemakhazeni
Ukuze uvimbele umkhuhlane nomkhuhlane ebusika, isinyathelo sokuqala ukuvakashela isitolo segrosa yangakini. Imikhiqizo emi-3 - ama-boosters anamandla amasosha omzimba azosiza ukuqinisa amasosha omzimba ngaphandle kwemithi
Imishwana emi-5 elimazayo okungafanele uyisho kothandekayo wakho
Kukhona imishwana engakwazi kushiwo kothandekayo - umyeni, isithandwa noma umthandi. Amadoda awathandi ngokufanelekile lapho ehlaza ubudoda bawo futhi engena endaweni yawo ngaphandle kwemvume
Kungani kuvela izingxabano nokuthi zingazixazulula kanjani?
Ake sithole ukuthi kungani kunezingxabano emndenini emsebenzini, ukuthi ungazixazulula kanjani ngendlela efanele nokuthi ungaqeda kanjani ihlazo ukuze sizuze thina
Okungafanele ukutshele amadoda: imishwana engu-14 ezolimaza ubuhlobo
Yini okungamele uyitshele amadoda? Miningi imishwana okufanele uyigcine kuwena, kepha sikhethe imishwana engajabulisi yamadoda